एकै दिन १२२ चिनियाँ नागरिक नेपालमा पक्राउ परेपछि चीनले लियो एक्सन, चिनियाँ प्रहरीको अनुरोधमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई लिन उतैबाट चार्टर्ड जहाज आउँदै ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/एकै दिन १२२ चिनियाँ नागरिक नेपालमा पक्राउ परेपछि चीनले लियो एक्सन, चिनियाँ प्रहरीको अनुरोधमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई लिन उतैबाट चार्टर्ड जहाज आउँदै !
एकै दिन १२२ चिनियाँ नागरिक नेपालमा पक्राउ परेपछि चीनले लियो एक्सन, चिनियाँ प्रहरीको अनुरोधमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई लिन उतैबाट चार्टर्ड जहाज आउँदै !
चिनियाँहरूलाई प्रहरीले ठाउँठाउँबाट र समूह–समूहमा पक्राउ गरेको छ । चिनियाँ अधिकारीले दिएको सूचीकै आधारमा मनमैजुका चार, बाँसबारीका दुई र बुढानीलकण्ठको एक घरमा छापा हानी प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, यो अभियान अझै जारी रहने प्रहरी अधिकारीले जनाएका छन् । ‘चिनियाँ पक्षले ६ सयजनाको सूची दिएको छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सोचेभन्दा थोरै मात्र पक्राउ परे, धेरै भागिसकेका हुन सक्छन्, यो अपरेसन जारी रहन्छ ।’ बाँसबारी, नयाँबजार क्षेत्रमा घर नै भाडामा लिएर बस्दै आएका चिनियाँ नागरिक पर्यटक भिसामा थिए । उनीहरूबाट करिब पाँच सय ल्यापटप तथा मोबाइल बरामद गरिएको छ ।
नेपाली सेना र प्रहरीसहित बारा र पर्सामा आज १३२ जनामा संक्रमण
पोखरामा पनि होलि खेल्न प्रतिबन्ध, घर बाहिर ननिस्कन कास्की बासीलाई जिल्ला प्रशासनको अनुरोध !
प्राधिकरणले भन्यो : भोली दिनभरी नै उपत्यकाका यी ठाउँमा बिजुली आउँदैन
कोरोनाकै कारण सकियो विरगञ्जको एक ब्यापारीक घराना ! आमा र भाई गुमाए लगत्तै ममताको पनि निधन